Amụma Nzuzo - Mụta ahia 2
Nzuzo gị dị mkpa. Anyị mepụtara Iwu Nzuzo a ka ị nwee ike ịghọta ikike gị dị ka onye ọrụ na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ Mụta 2 Trade. Anyị nwere ike ime mgbanwe oge ụfọdụ na amụma ahụ. A ga-etinye mgbanwe ndị a na ibe a. Ọ dị gị n'aka inyocha Iwu Nzuzo a mgbe niile ma mara gị maka mgbanwe ọ bụla emere ya. Anyị na-agba gị ume ka ị gaa na peeji a oge. Site na iji weebụsaịtị ị kwenyere na usoro ndị edepụtara na Iwu nzuzo a na Usoro ojiji. Nke a bụ Nzuzo Nzuzo anyị zuru oke na ya gbanwere nsụgharị ọ bụla mbụ.
Nchịkọta adreesị email gị
Debanye maka weebụsaịtị chọrọ ka ịnye adreesị ozi-e, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ dị mkpa iji kpọtụrụ gị na ịntanetị. Adreesị email ọ bụla e nyere nwere ike ịnweta, emelitere, gbanwee ma ehichapụ ya ma emesịa. Biko rịba ama, anyị nwere ike idobe otu adreesị email ọ bụla gara aga maka ndekọ anyị.
Adreesị ozi-e ị nyere ga-eji zitere gị akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị na mmelite ahịa na agaghị eji ya maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ resị ya ndị ọzọ.
A na-eji ozi a iji nyere aka ma melite ojiji nke weebụsaịtị, maka ebumnuche nkwukọrịta, yana ịgbaso iwu ọ bụla chọrọ. Anyị ga-ejikwa ozi a zaghachi ajụjụ ọ bụla ị nwere. Enweghị nkwenye gị, adreesị email gị agaghị ere ma ọ bụ kpughee ya na ndị ọzọ, karịa karịa ka akọwapụtara na Nzuzo Nzuzo a. belụsọ na iwu kwadoro anyị ime otu ahụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Iwu Ọchịchị chọrọ ka anyị mee ya ma ọ bụ maka ebumnuche nke wayo ma ọ bụ mpụ ọ bụla ọzọ).
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike igosipụta ozi gị iji kpuchido ikike iwu anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ozi ahụ metụtara omume na-emerụ ahụ ma ọ bụ nke egwu, ma ọ bụ na anyị nwere ezigbo ihe mere anyị ga-eji kwenye na igosipụta ozi a dị mkpa iji mezuo ihe iwu chọrọ ma ọ bụ soro iwu gọọmentị, usoro ụlọ ikpe, ma ọ bụ usoro iwu enyere anyị; ma ọ bụ iji kpuchido ma chebe ihe onwunwe anyị ma ọ bụ ikike ndị ọzọ, ndị ọrụ nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọha na eze. Nke a gụnyere mgbanwe nke ozi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ maka nchedo aghụghọ na nchedo ihe egwu kredit. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-ede akwụkwọ maka enweghị ego, bụ akụkụ nke nhazigharị, rere akụ ya ma ọ bụ jikọtara ya na ụlọ ọrụ dị iche, anyị nwere ike ree ozi enyere anyị site na weebụsaịtị ahụ na ndị ọzọ ma ọ bụ kesaa ozi gị na ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị jikọtara na.
Njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ nwere ike ịdị na weebụsaịtị a. Ọbụna ma ọ bụrụ na enweta weebụsaịtị site na njikọ sitere na weebụsaịtị anyị, anyị anaghị ahụta maka omume nzuzo ha ma ọ bụ ọdịnaya ahụ. Ojiji nke weebụsaịtị ndị ọzọ na-eme kpamkpam na ihe ize ndụ gị. A na-atụ aro ka ị nyochaa atumatu nzuzo na nchekwa nke weebụsaịtị ọ bụla ị gara. Pị na njikọ ndị ọzọ ga-eme ka ị banye na weebụsaịtị nke atọ. Anyị anaghị egosipụta ma ọ bụ ikike maka arụmọrụ, ogo, izi ezi ma ọ bụ nchekwa data nke weebụsaịtị ọ bụla nke atọ.
Ọ bụrụ n ’ọ bụla ọ bụla ịchọrọ Mụta 2 Trade ka ihichapụ ozi nkeonwe gị na nchekwa data iji zipu ozi email na support@learn2.trade na nkọwa gị ga-ehichapụ n’ime awa 72.
Mụta ahia 2 na-eji kuki na weebụsaịtị anyị iji cheta nkọwa ntinye gị. Na mgbakwunye, anyị na-eji kuki ndị ọzọ dịka nchịkọta Google iji mụta otu ndị ọrụ si akpa agwa na weebụsaịtị, yana, jiri MailChimp maka ozi email anyị. Ihe omuma niile anakọtara na-achikota na amaghi aha ha na-eji iji meziwanye arụmọrụ nke weebụsaịtị. Kuki anyị na-eji anaghị echekwa ozi nkeonwe ma ọ bụ nke onwe ma ọ nweghị ike ịgbaso ọrụ nchọgharị gị.
Emelitere ikpeazụ: December 22nd, 2020